Adeegyada Dugsiyada | Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Adeegyada Dugsiyada
Sida hormuudka galmada iyo xiriirka samafalka waxbarashada, waxaan bixinaa adeegyo tayo leh oo loogu talagalay iskuulada. Waxaan u adeegsannaa caddaynta ugu dambeysa ee ku saabsan saameynta sawir-gacmeedka ee carruurta iyo dhalinyarada si aan u siino casharro is-dhexgal ah oo loogu talagalay ardayda da'doodu tahay 11 illaa 18 sano oo qayb ka ah manhajka PSHE / SRE. Waxaan ardayda u siineynaa waxyaabo ku habboon da'da oo ka caawinaya inay maanta maraan bay'ada internetka. Iyagoo ka warqabaya saameynta caafimaadka, sharciga iyo xiriirka ee kufsiga qaawan ee filimada qaawan, waxay ka fogaan karaan inay ku dhacaan ama ay caawimaad raadsadaan haddii ay sameeyaan. Waxaan sidoo kale waalidiinta ku xoojineynaa inay kula hadlaan caruurtooda guriga dhexdiisa mowduucan khiyaanada leh. Wareysiyadayada noo gaarka ah ee laga duubay khubaro caafimaad iyo sharci iyo dadka soo kabashada isticmaalaya ayaa casharada ka dhigaya kuwo dhab ah. Waxaan calaamadeeynaa qalabka iyo taageerada waalidiinta iyo macallimiinta. Qalabyadu sidoo kale waxay ku habboon yihiin dugsiyada diinta ku saleysan.
"Maryan waxay siisay sheekooyin cajiib ah wiilasha wiilka mowduuca ee filimada: waxa ay ahayd mid isku dheelitiran, oo aan aheyn mid caddaalad ku dhisan, oo gacan ka geysanaya qalabaynta ardaydeena aqoonta ay u baahan yihiin si ay u sameeyaan doorashooyin ku dhisan noloshooda."
Stefan J. Hargreaves, Master Master Charge of Seminar, Dugsiga Tonbridge, Tonbridge
"Waxaan rumaysanahay in ardaydayadu u baahan yihiin meel amaan ah oo ay si xor ah ugala hadli karaan arrimo badan oo la xidhiidha galmada, xiriirka iyo helitaanka sawir-gacmeedka internetka ee da'da dijitaalka ah."
Liz Langley, Madaxa Waxbarashada Shakhsi ahaaneed iyo Waxbarashada Bulshada, Dollar Academy
Filimka qaawan ee internetku wuxuu ku yeelan karaa saamayn badan oo caafimaad, dabeecad iyo gaaritaanka carruurta maanta. Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale ogaato in sharciga Boqortooyada Midowday ee ku saabsan xaqiijinta da'da ee Sharciga Dhaqaalaha Dijital ah ee 2017 la rajeynayo inuu dhaqan gelayo dhamaadka 2019. Dowladda wali ma aysan shaacin waqtiga rasmiga ah. Saamaynta ayaa noqon doonta inay adkaynayso in carruurtu helaan qalabkan. Khubaradu waxay ka walaacsan yihiin carruurta qaarkood oo iyagu hore u noqday isticmaaleyaasha culus inay jiri karaan qaar ka mid ah saameyn caafimaad maskaxeed. Hadaad u maleynayso inay taasi khatar ku tahay iskuulkaaga, laga yaabee inaanu ku caawin karno.
Waxaan nahay joornaal iyo waxbarasho xiriirka sadaqada iyadoo la adeegsanayo neuroscience iyo cilmi sayniska bulshada oo ay weheliyaan mabaadii'da habdhaqanka. Iskoolajiyadeena xirfadleyda waxaa lagu aqoonsanayaa Kuliyada Boqortooyada ee Dhaqaatiirta Guud. Waxaan bixinnaa sannad-dugsiyeedka oo dhan khataraha isticmaalka pornography oo loogu talagalay ardayda da'doodu tahay 12 ilaa sanadka 18 oo qayb ka ah manhajka PSHE ama Manhajka Muwaadiniinta. Nidaamkayagu waa inaan bixinno caddaynta ardayda si ay uga caawiyaan iyaga inay isticmaalaan xirfadaha fekerka ee muhiimka ah iyo horumarinta xukunkooda. Waxaan sidoo kale awood u siineynaa waalidiinta in ay awood u yeeshaan inay si firfircoon ula shaqeeyaan caruurtooda guriga iyo inay muujiyaan ilo faa'iido leh. Waxaan inta badan ku martiqaadeynaa BBC TV iyo Raadiyaha iyo saxaafadda qaranka si ay uga faaloodaan mowduucaan.
Hay'adda Abaalmarinta Reward waxay bixisaa casharo kala duwan iyo wadahadal. Looma muuqan wax sawir ah. Wadahadaladu waxay ku habboon yihiin inay ku habboonaadaan da'da kooxda. Fadlan fiiri faahfaahinta hoose. Bilawga qorshooyinka casharrada macalimiinta si loo isticmaalo waxaa lagu dhawaaqi doonaa isbuucyada soo socda.
Soo bandhigayaasha adeegyadayada iskuullada waa Ms. Mary Sharpe, Advocate, Dr. Darryl Mead iyo Mrs. Suzi Brown. Ms. Sharpe waxay leedahay taariikh cilmi nafsiyeed iyo ku dhaqanka sharciga iyada oo xubin ka ah Kulliyadda U doodayaasha ee Scotland iyo Brussels. Waxay ku qaadatay sideed sano macallin qalin jabisay Jaamacadda Cambridge iyadoo wadata aqoon isweydaarsiyo ku saleysan caddeyn ku saabsan joogtaynta waxqabadka ugu sarreeya. Dr. Mead waa khabiir ku takhasusay tikniyoolajiyadda macluumaadka loona tababaray inuu yahay mid ka mid ah Horyaallada Dijital ee Dawladda Iskotishku Ilaa 2015, wuxuu ahaa kuxigeenka madaxa Maktabada Qaranka ee Scotland. Isaguna waa macalin tababaran. Suzi Brown waa macallin leh 7 sano oo waayo-aragnimo ah baridda PSHE ee iskuulada Ingiriisiga waxayna ahayd Kaaliyaha Housemistress ee Bishop's Stortford College, Hertfordshire muddo 5 sano ah. Waxaan xubin ka nahay qorshaha Dowladda Scottish-ka ee Difaaca Kooxaha nugul waxaanan dhammaynay tababar ku saabsan Ilaalinta Carruurta.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad tixgeliso adeegyadayada dugsigaaga, fadlan la xiriir Mary Sharpe, at mary@rewardfoundation.org ama telifoon ah 07717 437 727.
Waxaan la shaqeyneynaa labada kooxood ee isku dhafan oo isku dhafan. Qalabku waa kala duwanaansho. Wadahadallada iyo casharrada oo dhan waxay noqon karaan daqiiqado 40-60 muddo dheer oo ku haboon wakhtiga aad ku tageyso waqtiga su'aalaha.
Guud Horudhac ah Saameynta Pornography Internetka on:
halista caafimaadka jirka iyo maskaxda; helitaanka waxbarasho, dambi, xiriiro
wareysiyo fiidiyoow ah oo lala yeeshay dadka qaawan ee yar yar ee soo celiya
sida loo dhiso adkeysi iyo meesha laga helo caawimo
Galmada iyo Warbaahinta:
ogaadaan dhiirigelinta xayeysiinta, filimada iyo filimada
Aqoonsadaan cawaaqibta suurtagalka ah ee kaftanka filimada
fahmaa dhammaan waxyaabaha la qiimeeyo - qiimaha qofku wuxuu ka sarreeyaa wax kasta oo kale
fahmaan arimaha jinsiga sababtoo ah dadka ayaa muhiim ah
Galmada iyo Aqoonsiga:
sahaminta waxa ay ka dhigan tahay galmada (oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan horumarinta galmada)
ogow oo fahmaa calaamadaha galmada ee kala duwan
fahamsan qof walba waa mid gaar ah oo gaar ah
in la ogaado in galmada iyo calaamadaha jinsiga ama dabeecadda aysan noo qeexin
Galmada iyo Oggolaanshaha - Xorriyadda Doorashada:
Aqoonta sharciga ee ku saabsan ogolaanshaha galmada
cadee sida oggolaanshaha uu u shaqeeyo cilaaqaadka
ogow in qof kasta uu leeyahay doorasho iyo cod iyo sida loo isticmaalo kuwan
fahamsan qof walba qiimo ayuu leeyahay
fahamsan yihiin in xiriirrada wanaagsani ay kobcinayaan wada-xiriir furan iyo ixtiraam labada dhinac ah
sida sawirradu ay isbeddeshay iyo saameynteeda jiilkan
Siyaabo aad ugala hadli kartid caruurtaada
saameynta isticmaalka qasabka ah ee filimmada ee caafimaadka, dareenka, xiriirka iyo dambiga
xeeladaha, wadashaqaynta dugsiga, si ay uga caawiyaan carruurta inay dhisaan adkeysi ay u geystaan ​​waxyeelada lala xiriiriyo asluubta internetka
Qiimaha: Wixii wadahadal ah £ 500 iyo kharashyada safarka.
Adeegyada kale ee Dugsiyada
S2 iyo S4: Sexting: arrimaha caafimaadka iyo sharciga
Sidee maskaxda dhallinyarada u bartaan
Sababta maskaxda qaangaarka ahi waxay u nugul tahay qul qulqulin ka soo jiidashada
Daraasad xaaladeed oo sharci ah oo ku saabsan dhalinyarada qaangaarka ah ee lagu soo oogay denbiyada
Wareysiyo cajalado ah oo lala yeeshay dadka dhallinyarada ah ee jilicsan kuwaas oo soo kabsaday
S5 / 6: Pornography oo ku saabsan Maxkamad
Saameyn ku saabsan helitaanka iyo wax soo saarka
Khataraha daroogada anshaxa iyo xakameynta galmada
Ku dhaleeceynta saameynta warshadaha filimada iyada oo qayb ka ah 'dhaqaalaha dareenka'
24-Saacadda Digfeerada Digfeerka ee 2 c. 7 maalin kala duwan: Jimicsigu wuxuu daboolayaa dhammaan isticmaalka internetka
Qaybta 1 waxaa ka mid ah dood bilow ah oo ku saabsan cilmi baarista ku saabsan "naqshad qancin", oo ku saabsan qanacsanaanta degdegga ah iyo is-xakamaynta; talooyin ku saabsan sameynta sunta
Qeybta 2, ka sheekeyn wixii ay kala kulmeen isku day 24-ka saac ee sunta ah inta lagu jiro usbuuca soo dhexgalka
Ka eeg sheekooyinka wararka ee ku saabsan dhacdooyinka dhijitaalka ah / shaashadda la socota S4 iyo S6 ardayda dhigata dugsiga Edinburgh.
Ka warhaynta dhibaatooyinka suurtagalka ah ee ka yimaada filimada Internetka (P7 kaliya):
Maskax-qashinka caamka ah: faham shaqada shaqada maskaxda iyo cusub (rabitaan iyo fikir)
Aqoonsado sida maskaxdu uga jawaabto bay'ada oo ay u barto caadooyinka
Fahmaan sida sawirada muuqaalka jinsiga ah ay u wareeri karaan fikradaha; waxa la sameeyo haddii aan arko fiidyow iyo sawirro iga baqaya
Qeybta 1 waxaa ka mid ah falanqaynta bilowga ah ee ku saabsan sida internetku u joojin karo naga rabto inaan xiriir la yeelano dadka kale oo na naga dhaco hurdada; Talooyin ku saabsan samaynta fal-baxa
Qeybta 2 dood ku saabsan wixii ay kala kulmeen isku day 24-ka saac ee sunta ah inta lagu jiro usbuuca dhexgalka
La hadal waalidiinta wixii cadeymo ah ee ugu dambeeyay ee ku saabsan waxyeelada iyo xeeladaha lagu xallinayo dhibaatooyinka. Tani waxay ka caawisaa inay jabiso barafka wadahadalka guriga
Istaraatijiyadaha, iyada oo la kaashanayo iskuulka, si looga caawiyo carruurta inay abuuraan adkeysi ay u geystaan ​​waxyeelada la xidhiidha qaawaanka internetka
Fadlan kala soo xiriir na siiso oraah qoran oo bilaash ah. Hay'adda Reward Foundation waxay sidoo kale bixin kartaa casharo si gaar ah loo qaabeeyey si loo daboolo baahiyahaaga.
Qiimuhu waa VAT lacag la'aan waxaana ku jiri doona dhammaan safarka ku yaala suunka dhexe ee Scotland iyo walxaha.